Nomad Yakakomberedzwa Yakakwirira Gomo reMhepoTags | Ndinobva mac
Kune zvakawanda zvishongedzo zveApple AirTags uye mune iyi kesi, Noma ine matatu mamodheru emabutiro ayo anogona kubatsira zvakanyanya kune vashandisi veaya ekutsvaga madhivhosi. Iyo Nomad Yakakomberedzwa Pamusoro peGomo, tendera mushandisi kuanamatira pese pese mukuwedzera pakudzivirira pamvura, abrasions, guruva, nezvimwe.
Iyi kadhi chinhu chinowanikwa kune chakasarudzika kiyi iyo iwe yaunogona kuwana yeAirTags, mune ino kesi chatinofanirwa kuita kuisa chipenga mukati merudzi urwu rwechinamato ndokuisa chero kupi. Ichadzivirirwa nguva dzose uye yakanyatsovanzwa.
Nomad inopa matatu marudzi eCurved Surface inowanikwa, imwe neimwe yadzo inogadzirwa nezvinhu zvakasiyana zvichienderana nekushandisa kwatichazopa. Iyo inodzivirira mhando ichave iyo fiber imwe, asi kune zvakare iyo silicone modhi uye iyo inonzi Powermesh.
Uyo anopa iyo aramid fiber goko (rakafanana nekabhoni fiber) Zvinoenderana neNomad yakasimba kwazvo uye inobvumidza yakanyanya AirTag dziviriro. Iyo yakaoma gomo gomo rakamisikidzwa nekuvhunduka kunoputira furo kudzivirira rattle uye chengetedza zvinhu zvakasimba, uku zvichinyatso kuvanzwa kuti zviwedzerwe dziviriro. Pamusoro pezvo, iyo glue yavanowedzera ine simba rakapetwa kaviri saka zvichanetsa kuti riwe kana kuribvarura kubva panzvimbo yaro.
Ivo zvakare vane mune iyo katarogu modhi yakagadzirwa nesilicone uye izvi zvinonzwisisika zvichibvumira kuchengetedzwa kwakachengeteka kweAirTag asi pasina kuomarara kunge fiber. Iyo yakakomberedzwa pamusoro pegomo yakamisikidzwa nekuvhunduka inopinza furo kudzivirira rattle uye chengetedza chishandiso zvakachengeteka uye zvakachengeteka.
Kuti vapedze vanoratidza a Powermesh yakagadzirwa zvigadzirwa inova yakati kurei kupfuura vamwe vese asi pasina kupa chibayiro mukugara kwechigadzirwa. Izvi zvinobvumidza kutsiva kuri nyore uye kubviswa kweAirTag kubva mukati nekuti yakagadzirirwa kuti ichengetwe mukati mehombodo kana sutukesi. Unogara uchichinja mikwende uye uchida kuronda zvinhu zvako? Iyi ndiyo sarudzo yako sezvo isu tichigona kubvisa nyore nyore AirTag kubva mukati uye kuiwedzera kune imwe nzvimbo.
Marudzi matatu eanotonhorera Nomad zvishandiso zvevashandisi veAirTag
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Nomad Yakakomberedzwa Pamusoro peGomo reMhepoTags
Apple inosimbirira vashandi vayo pakupera kweterevhizheni munaGunyana